Ny sakafo japoney tsy misy sira dia natao mandritra ny 13 andro, mandritra izany dia mety hahavery 5-9 kg ny lanja be loatra ianao. Saingy tsy ny zava-drehetra dia tsotra araka ny fahitana azy.
Betsaka ny olona zatra mihinana sira, ary tsy misy sira dia samy hafa ny tsiron'ny sakafo. Noho izany, tsy ny rehetra no mitazona sakafo toy izany, na dia mametra ny vatana aza ny famerana ny sira amin'ny sakafo, saingy tsy tokony holavina tanteraka izany.
Amin'ny anaran'ny sakafo, ny teny "Japoney" dia tsy misy ifandraisany amin'ny nahandro Japoney. Raha ny loharanom-baovao sasany dia noforonina io sakafo io. sakafo ara-pahasalamana any amin'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana any Japon, izay angamba no niantsoan'izy ireo azy. Noho ny fahombiazany dia niely vetivety eran'izao tontolo izao ny sakafo.
Raha ny fanamarihana nataon'ny olona izay efa nandalo io sakafo io dia zakaina tsara ny sakafon'ny Japoney tsy misy sira, fa misy kosa ireo izay, aorian'izany, nankany amin'ny tobim-pitsaboana mba hitsabo. Aza hadino izany alohan'ny fihinanana sakafo rehetra, aza malaina ary mankanesa any amin'ny dokotera mba hanaovana consultation. Ny famerenana amin'ny laoniny ny fahasalamana very dia lafo kokoa ary mety hiteraka vokany tsy azo sitranina.
Araka ny fantatrao, ny sira be loatra amin'ny sakafo dia mety miteraka edema, izany hoe ny fihazonana tsiranoka ao amin'ny vatana, izay miantoka ny lanjany be loatra. Raha mifikitra amin'ny sakafo tsy misy sira ianao dia afaka manala an'ity tsiranoka ity ary very kilao vitsivitsy.
Ny sakafo japoney tsy misy sira dia heverina ho hentitra, ka tsy azo ovaina ny sakafo sy ny andro fihinanana azy. Ny sakafo sakafo dia misy sakafo ambany kaloria tsy misy sira sy zava-manitra. Mandritra ny andro dia avela hisotro rano mineraly tsy misy gazy na dite tsy misy siramamy.
Sakafo sakafo japoney tsy misy sira:
Ny andro voalohany:
Ho an'ny sakafo maraina: kafe mainty 1 kapoaka tsy misy siramamy sy additives hafa.
Ho an'ny sakafo atoandro: atody nandrahoina mafy - 2 pcs., 1 sotro. ranona voatabia, laisoa nendasina.
Ho an'ny sakafo hariva: trondro steamed - 200 gr., Kefir ambany isan-jato - 300 ml.
Andro faharoa amin'ny sakafo:
Ho an'ny sakafo atoandro: salady trondro sy salady laisoa.
Ho an'ny sakafo hariva: hena nandrahoina - 200 gr., Kefir ambany isan-jato - 300 ml.
Andro faha-XNUMX amin'ny sakafo tsy misy sira:
Ho an'ny sakafo maraina: kafe mainty 1 kapoaka tsy misy siramamy sy additives hafa + toast.
Ho an'ny sakafo atoandro: zucchini - 1 pc. (amin'ny endrika caviar na grilled).
Ho an'ny sakafo hariva: atody - 2 pcs. hena nandrahoina - 200 gr., salady laisoa.
Ho an'ny sakafo atoandro: karaoty - 3 pcs. (amin'ny endrika caviar), fromazy - farantsa 2, atody papelika - 3 pcs. (manta).
Ho an'ny sakafo hariva: misy voankazo.
Andro fahadimy amin'ny sakafo tsy misy sira:
Ho an'ny sakafo maraina: karaoty manta - 100 gr. (azo asiana ranom-boasarimakirana)
Ho an'ny sakafo atoandro: trondro - 200 gr. (natsatsika), ranom-voatabia - 1 sotro ..
Sakafo hariva: salady voankazo.
Ho an'ny sakafo atoandro: henan'akoho - 500 gr., Salady legioma.
Ho an'ny sakafo hariva: atody - 2 pcs., Salady karaoty 2 (azonao atao amin'ny vanim-potoana menaka legioma).
Ho an'ny sakafo maraina: dite 1 kaopy tsy misy siramamy na additives hafa.
Ho an'ny sakafo atoandro: hena - 200 gr. (haohana na andrahoina), salady voankazo.
Ho an'ny sakafo hariva: voankazo.
Dia miverina ny menio, aiza ny andro 8 = andro 6, andro 9 = andro 5, andro 10 = andro 4, andro 11 = andro 3, andro 12 = andro 2, andro 13 = andro 1.
Prev Lasopy mandoro tavy - fomba fahandro marobe ilaina amin'ny famoizana lanja
Manaraka Ahoana no fiasan'ny fihenan-danja?
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,806.